Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta guda galaya akhrinta labaad ee hindise sharciyeedka Maxkamadda dastuuriga – STAR FM SOMALIA
Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta guda galaya akhrinta labaad ee hindise sharciyeedka Maxkamadda dastuuriga, waxaana hindisahan uu ka mid yahay sharciyada ugu muhiimsan ee hor-yaala Baarlamaanka.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa sidoo kale ka doodaya qaraar uu soo diyaariyay Guddiga maaliyadda ee Baarlamaanka, iyadoo marka qaraarkaas laga doodo ay guda geli doonaan ajandaha labaad ee kulanka oo ah hindise sharciyeedka Maxkamadda Dastuuriga.
Maxamed Cumar Maxamuud oo ah hab-dhowraha Baarlamaanka ayaa u sheegay iadaacada starfm in hindise sharciyeedka Maxkamadda Dastuuriga uu horay Baarlamaanka u hor-keenay Wasiirkii hore ee Cadaaladda iyo Dastuurka, isla markaana uu maray akhrinta koowaad.
Xildhibaan Maxamed Cumar ayaa sheegay in sharciga maxkamadda dastuuriga uu faa’iido weyn u leeyahay dalka, isla markaana marka la dhiso Maxkamadda Dasturiga ay awood u leedahay inay dhageysato muranada aan waafaqsaneyn waxa ka baxsan dastuurka dalka oo la isku qabto.
Maxkamadda dastuuriga ayaa go’aan ka gaarta marka ay dhacaan is qab qabsi Madaxda dowladda ama in Mas’uul lagu soo eedeeyo inuu jebiyay qodob ka mid ah dastuurka.